Iseti yabathengisi kunye neFektri-China set set manicure Abavelisi
I-Nail Clippers Set esetiwe kakuhle, ixhasa ii-wholesales ezinkulu
2.Seta iziClippers zeSipikili, ayisiyontle kuphela, kodwa ikwasebenza.Yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu insimbi, Izinto ezinesikhumba, zilungele wonke umntu.
3. Iseti yesikhonkwane sefashoni eyenziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu, isixhobo se-Nail sisitayile, somelele kwaye sikhululekile ekuphathweni.
4. Le Kit Nail Clippers Kit kubandakanya yonke into oyifunayo ukuze uzilungiselele kwaye uzilungiselele yonke imihla. Izixhobo ezipheleleyo, kulula ukuzisebenzisa.
5.Ukulungele ukusetyenziswa kobugcisa okanye ukusetyenziswa kwekhaya, i-salon yobuhle, ivenkile ye-manicure, i-pedicure shop, njl njl kunye nabantu kubandakanya i-novice, Yamkela ulwenziwo.
I-6.Ingaphandle eyenziwe ngxande olumnyama lwe-PU yesikhumba ibonakala ikhetheke kakhulu kwaye igcwele imfihlakalo.
7.Yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, vumela inzalo ngokukhuselekileyo, thintela umhlwa kunye nokunciphisa umngcipheko wosulelo.
8. UKUSETYENZISWA KOMSEBENZI NGOKUGQIBELA: Ukuzilungisa izandla, ukubopha iinzipho, iAnti-Acne, ukukhupha umzimba, ukuLungisa amashiya.
9. Kulula ukuphatha ukuhamba ekhaya.
I-15pcs yoBuchule boMntu oCwangcisiweyo oCwangcise i-Pedicure isikhonkwane seKhithi yoKhathalelo lweeNsimbi ezingenanto
* Izinto eziMgangatho oPhezulu: Iifayile zethu zezikhonkwane zenziwe ngezinto eziphuculweyo ze-emery, enobungqongileyo kwindalo,
ikunika isikhonkwane esitofotofo esenza amava.
* Uyilo olucekeceke ngokulula: Ezi fayile zikhaphukhaphu zilula kwaye kulula ukuzisebenzisa. Faka nje uxinzelelo olukhanyayo kwaye ungabona iziphumo ngokukhawuleza, kodwa azizukugoba!
* Iibhodi ze-Emery ezinamacala amabini: Ezi buffer zezikhonkwane zilungele iinzipho, iinzwane, iinzipho zendalo, iinzipho ze-acrylic, ubuxoki
iinzipho njalo njalo ngeebhodi zeemery ezinamacala amabini.
* Ngokugqibeleleyo iiSalons kunye neKhaya: Ezi fayile zomgangatho wobuchwephesha zikunika isisombululo esihle sokugcina i-acrylic yakho entle, iinzipho zendalo nezobuxoki. Unokuba neesalon zobungcali kunye nobugcisa besikhonkwane be-DIY ekhaya.
IZLA 7 in 1 Insimbi engenacingo yeManicure eSetwayo yokuCoca iiManicure kunye nePedicure Kits yoBuchule beZikhonkwane zeZikhonkwane Izixhobo zokuKhathalela ukuHamba okanye ukuKhaya
UKUSETYENZISWA KWEENKQUBO 7 KWI-1 KIT YOKUZILUNGISELELA: Umsebenzi osetyenzisiweyo we-manicure ujolise kwizikhonkwane zokucheba, isixhobo ngasinye senziwe ngobunono kwaye sinokuhlangabezana nazo zonke iintlobo zeemfuno zononophelo kubomi bemihla ngemihla, esinye sibekwe esandleni, sihleli ngokukhululeka.
Izixhobo ze-100% ze-Stainless High Quality: Izixhobo ze-Manicure kunye ne-Pedicure zenziwe nge-Stainless, le seti yomelele kwaye yakhiwe ukuba ihlale kude, evumela inzalo ngokukhuselekileyo, kuthintela umhlwa kunye nokunciphisa umngcipheko wosulelo.
Ityala lokuHamba ngokuShukumayo: Ngaba uyafuna ukuba neseti ye-manicure engathathi ndawo xa useluhambeni okanye ekhaya? Ukuseta i-IZLA pedicure kuyilwe ngosayizi onokukhuseleka, ungayifaka naphi na apho ufuna khona, njengesikhwama semoto, imoto, imithwalo, iofisi njalo njalo, zilungele ukuhamba okanye ekhaya.
Esona sipho sihle: Izixhobo zoManicure ziza noyilo lobugcisa bokupakisha. Ityala lenziwe ngelaphu ekumgangatho ophezulu kunye nesikhumba se-PU, esitayile kwaye sihle kwaye senzela isipho esihle.
Uthintelo lweLahleko: Isutikheyisi ye-PU-yesikhumba iyaphatheka kwaye inokuvulwa ngokulula ngonqakrazo olunye lweqhosha, elinokuthi ngokuqinisekileyo likhusele, ligcine izixhobo zakho kwaye lizithintele kwilahleko.